Radio AIR iri yemahara app inotibvumidza kuteerera kune anopfuura zviuru zvitanhatu zviteshi zveredhiyo kubva kutenderera pasirese | IPhone nhau
Radio AIR chirongwa chemahara chinotibvumidza kuteerera kunhepfenyuro dzinopfuura zviuru zvitanhatu kubva pasirese
Kubva kuvhurwa kwayo uye kusiyana nema Android terminals, kubva ku iPhone hatife takakwanisa kuteerera mimhanzi yakananga kubva kumagumo edu asi tinozviita kuburikidza nekushandisa uye kuburikidza neinternet, inova inogona kunge iri dambudziko padanho redu re data kana zvisiri isu tinozviita kuburikidza nekubatana kweWifi. MuApp Store tinokwanisa kuwana mashoma mashandisirwo, zviripo chaizvo haana akawanda, anotibvumidza nakidzwa newairesi yatinofarira, asi mazhinji acho anobhadharwa. Nhasi tiri kutaura nezve Radio AIR, application yemahara iyo inotibvumidza isu kuteerera kune anopfuura zviuru zvitanhatu zveredhiyo kubva kutenderera pasirese.
Pakati penhepfenyuro dzeSpain dzinowanikwa kuburikidza nechikumbiro ichi pane Cadena 100, Cadena Dial, Cadena Ser, Europa FM, Onda Cero, M80 Radio, Kiss FM, Los 40 Principales, Máxima FM, Radio Nacional de España… Asi zvakare tTinogona zvakare kuteerera kunhepfenyuro kubva kuArgentina, Mexico, Peru, Colombia ...
Radio AIR main maficha
Nguva yekubvisa application.
Rondedzero yezvatinofarira, kwatinogona kuchengeta maredhiyo atinoteerera zvakanyanya.
Zvinoenderana nechiteshi, chinyorwa chebhuku rwiyo chinoratidzwa pamwe nekubatana kune iTunes kuitira kuti tide kuitenga.
Kutamba kumashure neichi skrini kunze kweiyo iPhone, iPad kana iPod touch.
Mikana yekutsvaga nevakadzi.
Kuti ugopa chikumbiro chemahara, Radio AIR inotipa kushambadzira, dzimwe nguva mune yakazara skrini, kushambadzira isingakanganise kutamba mimhanzi, saka harisi dambudziko kana uchishandisa chishandiso ichi. Radio AIR inoda yakaderera yeIOS 8.0 kana kumberi uye inoenderana neese maApple madivayiri anotungamirirwa neIOS. Iko kunyorera kune avhareji chiyero che4,5 nyeredzi kubva pa5, saka ivimbiso yerunyararo rwepfungwa.
Radioair - Radio Music machativakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Radio AIR chirongwa chemahara chinotibvumidza kuteerera kunhepfenyuro dzinopfuura zviuru zvitanhatu kubva pasirese
Moto Emblem Magamba, mutambo wechitatu weNintendo pane iOS App Store
Ongorora kurara kwako kubva kuApple Watch neAotSleep